အလင်းရောင်ကြယ်များ: April 2013
23-ဥက္ကံမြို့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်
၃ဝ-၄-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ဝ၉:ဝဝ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံမြို့၊ ဆင်ဖြူရှင်ရပ်ကွက်နေ အလံတိုင်ကျောင်းတိုက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင် ဦးလှိုင်တင်(၆၂)နှစ် သည် တိုက်ကြီးရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အလံတိုင်ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင် သည့် ကိုရင်အရှင်ပုည (၁၁)နှစ်သည် ဥက္ကံဈေးတောင်ဘက်၊ ဘုရားကြီးလမ်းအတိုင်း ဆွမ်းခံကြွလာ စဉ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/30/2013 09:46:00 pm 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
24-၀တပ်ဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့် KIA တပ်ဖွဲ့အတွင်းသေနတ်များကိုပြင်ဆင်
KIA တပ်ဖွဲ့ မှ တိုက်ပွဲအတွင်းပျက်စီးသွားသော လက်နက်များကို ပြန်လည်ပြန်ဆင်ရန်အတွက် “ ၀ ” တပ်ဖွဲ့ မှ လက်နက် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
“ ၀ ” တပ်ဖွဲ့မှ လက်နက် ကျွမ်းကျင် သူ ၂ဦးသည် လိုင်ဇာသို့ ဧပြီလ ၂၆ရက်နေ့ က ရောက်ရှိလာပြီး KIA တပ်ဖွဲ့ များဖြင့် စခန်းတွေမှာ ပျက်စီးနေသော လက်နက်များကို လိုက်လံ ပြင်ဆင်နေကြောင်း၊ စခန်းတွေ မှာရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း လက်နက် ခဲယမ်းများကိုဖြည့်တင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦး၏ပြောပြချက် အရသိရှိရပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/30/2013 09:02:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/30/2013 08:01:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒီကနေ့ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကံမြို့ဈေးအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုရင်တစ်ပါးတို့ မတော်တဆတိုက်မိပြီး သပိတ်ပြုတ်ကျရာက စတင်ခဲ့တဲ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/30/2013 06:39:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 11:14:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရခိုင်ကမ်းဝေ ငါးဖမ်းခွင့်ကို ဇွန်လ တစ်ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Closing Season အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ရက်ပေါင်း (၄၅) ရက် တိတိ ပိတ်ထားမည်ဟု ငါးလုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ ကနေ ဇူလိူင်လ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ပိတ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ၃လ တောင်းဆိုထားတာကို တစ်လခွဲဘဲ ဗဟို အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခု ပင်လယ်ပြင် ငါးဖမ်းခွင့် ပိတ်ရခြင်းမှာ ငါးမျိုး မပြုန်းတီးရေနှင့် ငါးများ ရှင်သန်ကျက်စားမူ တိုးလာရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 07:45:00 pm 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
18-ပြောချင်တာပြော၊ ကြားချင်တာ ကြားခွင့်ရတဲ့ ခေတ်ရောက်ပြီ အဆိုတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
ချန်ချန် စီစဉ်တဲ့ မိဘမဲ့ကလေးများ အတွက် အနုပညာရှင်များရဲ့ ရန်ပုံငွေဈေး ရောင်းပွဲ အကြောင်း စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ချန်ချန်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဇော်ဝင်းထွဋ်လည်း တက်ရောက်လာပါတယ်။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ကို တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲ ပြောင်းလဲစ ပြုလာပြီ ဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခံစားမှုတွေကို သိရဖို့ အတွက် သူ့ကို မေးခွန်းတွေ မေးချင်လာ မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲဇော်ဝင်းထွဋ်ကို ပြောင်းလဲလာတဲ့ တိုင်းပြည် အကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း တွေကို မေးမြန်းဖြစ် ခဲ့ပါ တယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 10:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
17-မိခင်မှာကြားတဲ့စကားအတိုင်း အသက်ထက်ဆုံး နေထိုင်သွားမယ့်စိုးသူ
စိုးသူက မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို စက်တင်ဘာလက ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မိခင်ကြီးရဲ့အနားမှာ အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက် ခဲ့ပါတယ်။ သို့ ပေမယ့် စိုးသူရဲ့မိခင် ဒေါ်ခင်သူဇာ (အသက် ၇၂နှစ်)သည် ဇန် နဝါရီ၁၆ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်နေအိမ်မှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 10:39:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
16-မိဘတွေနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မှာ ဆေးစစ်ခဲ့တဲ့သင်ဇာဝင့်ကျော်
သင်ဇာဝင့်ကျော်က မိဘနှစ်ပါးကို ဆေးစစ်ဖို့အတွက် ဒီဇင်ဘာခရစ္စမတ်နဲ့ နယူး ရီးယား အနားယူမယ့် ရက်တွေမှာ ဘန်ကောက်ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက် နေ့က သွားတာဖြစ်ပြီး ၂၃ရက်နေ့မှာ ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အဖေ၊ အမေနဲ့သွားတာဖြစ်ပြီး မိဘ၂ပါးနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ဆေးစစ်ခဲ့ တယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်နေ့က သူမရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပေမယ့် နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 10:36:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
15-ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ဒေါ်လာကို စားတဲ့ဧရာဝတီဘလော့က MyanmarExpress နှင့် Opposite Eyes ၀က်ဆိုက်တွေကို အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်သွယ်မှု ရှိသည်ဟုပြော
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 10:30:00 am2comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
14-အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်သော စစ်သားများအတွက် ထူးခြားသည့် အရေးယူမှုများ
အပျိုမိန်းကလေး တစ်ယောက်၊ စစ်သားဘေးက ဖြတ်လျှောက်လျှင် မကြောက်ပါနဲ့။ မလန့်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဟန် ပျက်ေ လာက်အောင် ကိုယ်နှုတ် အမူအယာ လုပ်သည်နှင့် ပြစ်မှုပုဒ်မ(၅၀၉) အရ ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ် အပြစ် ပေး ခံရဖို့ ဥပဒေက ပြဌန်းထားပါတယ်။ သားပြောမယားပြော ပြောတာ၊ အိမ်မှာနေတုန်း လာေ ချာင်း တာ တို့ ဆိုလျှင်တော့ အဆစ်တွဲ စစ်ဘက် ဥပဒေ လေးတွေပါ ထည့်ပေါင်းပြီး ထောင် ၅ နှစ် အထက် ကျေ စလောက် သည့် ဥပဒေ ရှိပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 10:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
13-ကိုမြအေး အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများခင်ဗျာ...
မွတ်စလင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး လို့ တောင်ဆိုပါလျှင် အောက် ပါ အချက်များကို ပြည်သူတရပ်လုံးသိစေရန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ရဲပါသလား ခင်ဗျာ...
ဆိုက်ဘာတိုက်ပွဲလိုပဲ ရေးတဲ့ လူကလည်းရေးတယ် ဝေဖန်တဲ့ လူကလည်း ဝေဖန်တယ် ကျနော်ကတော့ ကော်ပီ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 06:07:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
12-ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘာတွေလုပ်လုပ် မင်းအမြဲ မှတ်ပါ မင်း မြန်မာ
စာဖတ်သူများခင်ဗျာ ထိုပို့ စ်လေးဟာ ကျွန်တော်လိုငပိန်းထက်အင်မတန်ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သူများ ရေးသားထားတယ်လို့ ယူဆမိ၍
OE-Facebookမှကူးယူဝေမျှရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ် ဖတ်ရှု့စေခြင်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 05:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
11-ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မိုင်းရှုးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဗမာလူမျိုးများအား အတင်း အဓမ္မ နှင်ထုတ်နေ
ယခုနှစ်မတ်လမှစ၍ ၀မ်ဟိုင်းအခြေစိုက်ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းရှုး မြို့ နယ် အတွင်းနေထိုင်ကြသော ဗမာလူမျိုးများအား အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း များေ ဆာင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများထံမှ ကြားသိရပါတယ်။ ၎င်းသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ဒေသခံများအား မေးမြန်း ချက်အရ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 04:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
10-" အများသုံး ဝိုင်ဖိုင်များတွင် Facebook သုံးသူများ Account Hacking လုပ်ခံရနိုင် "
အ များသုံး ဝိုင်ဖိုင်ဧရိယာများတွင် သုံး စွဲသူများ၏Facebok အကောင့် များကိုHack ပြုလုပ်ရန် အတွက်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 03:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
9-မြောက်ကိုရီးယားက စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုကြီး တစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေစဉ် အတွင်း တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားများ ကေဆုန် စက်မှုဇုန်မှ ထွက်ခွာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/29/2013 02:53:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
8-အံ့ဘွယ်ကောင်းသော လူတစ်ဦးရဲ့ အစွမ်းပါ လူငယ်များအတုယူလေ့ လာကြည့် သင့် ပါတယ်။ဗွီဒီယိုဖိုင်ကောင်းလေးပါ
ဘဝကိုဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေပါစေ မိမိရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နှင့် မှန်ကန်စွာဇွဲမလျှော့ ပဲ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အံ့ဘွယ်ကောင်းသော လူတစ်ဦးရဲ့ အစွမ်းပါ လူငယ်များအတုယူလေ့ လာကြည့် သင့် ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှကူးယူတင်ပြပါသည်အသံ၂ထပ်မဖြစ်စေရန်။ဘေးနားမှအော်တိုတင်ထားသောMp3သံစဉ်လေးခနပိတ်ပြီးမှထိုဗွီဒီယိုဖိုင်အားPlayလိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 08:37:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
7-မင်း ကျိန်စာကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် တောင်းရမ်း စားသောက်ရသူများ
ဟိုးယခင် မင်းသိင်္ခ၀တ္တုများတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း မဂ္ဂဇင်းများတွင် လည်းကောင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုခေတ်ထိုအချိန်က အတွေးတွင်တော့ ထို အယူအဆကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင်တော့ လက်ခံဖို့ အတော် ခဲယဉ်းသည်။ ဖတ်ခဲ့ဖူးသော ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်တော့ အခြား မြို့ရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချသော်လည်း တောင်းရမ်းမှု မပြုလုပ်ပါက အိပ်၍မပျော်၊ အိပ်မက်ဆိုးများ မက်သည်ဟု ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 08:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
6-( ကော့ကရိတ်-ကျုံဒိုး လမ်း က ဗိုလ်လှမင်း ဓါးပြတိုက် တဲ့ နည်း )))
“ကြက်ဖ ခွတ်” ဖို့ အကြော လျှော့ထားပေတော့ ။ ဗိုလ် လှမင်း ဆိုတာ .. တပည့် ၁၀ ယောက်လောက်ရှိပြီး အင်မတန် စေ့စပ်တဲ့ နာမည်ကြီး ဓါးပြဗိုလ် တစ်ယောက် ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 08:24:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
5-ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း ဆီတင်ဘင်္ဘောနှင့် ကားသင်္ဘောတိုက်မိ
ယနေ့မွန်းလွဲ ၃း၀၀ နာရီခန့်က MITT သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွါလာသောကားတင် သင်္ဘော နှင့် မြန်မာ့ရေနံဓါတုဗေဒလုပ်ငန်းပိုင်ဆီတင်သင်္ဘောဖြင့်တိုက်မိပြီး ဆီတင်သင်္ဘောနစ်မြုပ်ခဲ့ သည်။M.VMelacca Highway ကားတင်သင်္ဘောမှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 07:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
4-မူဆလင် ကို မူဆလင်လို့ မမြင်ပဲ - အဖေလိုမြင်နေသူ ဂေါက်ကြောင် များ ဖတ်ရန်
မူဆလင်အယောက် ၁၀၀ မှ မြန်မာ ၁၁ ဦးကို အသေ၀ိုင်းရိုက်-
မြန်မာ၁ယောက်ကို မူဆလင် ၁၀ယောက်နှုန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရ-
ရလဒ်- မြန်မာ ၁၁ ယောက်အနက် - ၈ယောက် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 07:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသတွင် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၂ ခု ကြား တိုက်ပွဲငယ်များ ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် တဦး သေဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရသွားသည်။
သောကြာနေ့က သံလွင်မြစ်အတွင်းမောင်နှင်လာသည့် ကရင်ပြည်နယ်ခြားစောင့်တပ်၏ စက်လှေတစင်းကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 03:43:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
2-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတမဖြစ်နိုင်ဟု ဦးဌေးဦးမှ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း UPI ၀က်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ရန် အစီအစဉ် မရှိ ကြောင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးဌေးဦး ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု UPI သတင်းတွင် Suu Kyi won't be president, ruling party says ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 02:42:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
1-ဆန္ဒပြမူ့ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူတွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ဖော်ထုတ်မည်.....
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ သွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့အပြင် FB ပေါ်၌လည်း ခွန်ဒီးယမ်တို့လည်း ပါဝင်နေခဲ့သည် ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/28/2013 02:34:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅၆-ဘင်္ဂလီများအား မြန်မာ စစ်တပ် နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေး
ယနေ့ 26-4-2013 နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံချက်ဖြင့် ဘင်္ဂလီများအား လူဦးရေ စာရင်းကောက်ယူရန် ဘောဒူဗ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့စစ်ဆေးရန်သွားရောက်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 10:58:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅၅-ဒီမိုကရေစီ နှင့်မထိုက်တန်သည့် မြန်မာလူထု ဆိုင်ကယ်ဖယ်ခိုင်းသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲကို မူးကာ သံတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 10:49:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅၄-အံ့ဘွယ်ကောင်းသော လူတစ်ဦးရဲ့ အစွမ်းပါ လူငယ်များအတုယူလေ့ လာကြည့် သင့် ပါတယ်။ဗွီဒီယိုဖိုင်ကောင်းလေးပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 10:54:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅၃-Facebook က ချာတိတ်နဲ့ ချိန်းတွေ့မိလို့ အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ မြန်မာမိန်းခလေး
ဟိုတလောက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အမေပျောက်လို့ ရှာပုံတော်ဖွင့်တဲ့ သဲသဲသော် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုတော့ အဲဒီ့ကောင်မလေး အသတ်ခံရလို့ သေရှာပါပြီ။ ဒီနေ့မနက် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ အဲဒီ့သတင်းတွေ့တော့ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေမိတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 10:33:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အခုရက်ပိုင်း လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသတွင်း တားမြစ်နယ်မြေထဲ လယ်ဝင်ထွန်ခဲ့တဲ့ ဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကြား သေနက်နဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အထိ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဒေသခံတွေကို တရားဝင် ဆန္ဒပြခွင့် ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူ ကန့်သတ်ဦးရေ ၅၀၀ နဲ့ ဆန္ဒပြချိန် သုံးနာရီ ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မဆုမွန်က တင်ပြထားပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 09:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅၁-ကျောက်ဖြူတွင် လေယာဉ်က ကျဲချခဲ့သော စစ်ကျန် ဗုံးကြီး တစ်လုံး တွေ့ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လေယာဉ်ပေါ်က ကျဲချ သွားခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော စစ်ကျန် ဗုံးကြီး တစ်လုံးကို လယ်ကွင်း တစ်ခုတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ ဗုံးကြီးမှာ အရှည် ၂၇ လက်မ၊ လုံးပတ် ပတ်လည် ၃၀ လက်မ၊အလေးချိန် ၄၀ ပိဿာခန့် လေးကြောင်း ယနေ့ထုတ်ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 09:10:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅၀-မြန်မာပို့ကုန်တွေကို အမေရိကန်က အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုတော့မည်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 08:24:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၉-ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်း ကမ်းနားနှင့်ဝေးသည့်ကျေးရွာ များ သောက်သုံးရေအခက်အခဲကြီးမားနေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ် တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ကျေးရွာ(၁၀)ရွာ၌ ရေပြတ်လပ်နေခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ လာရောက်ကူညီပေးလျက်ရှိသော်လည်း လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ဟု ဒေသခံများထံက သိရှိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 08:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တစ်နေ့မှာ အဘွားတစ်ယောက်ဟာ ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ အိမ်က သူ့ခွေးလေး အတွက် ခွေးစာသွားဝယ်ပါတယ်။ ခွေးစာဝယ်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းမယ်လုပ်တော့ ကောင်တာက ငွေကိုင် မိန်းကလေးက ..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 07:35:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၇-ယာဉ်ထိန်းရဲ ပါးရိုက်ခံရမှု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်းမြေးကို ပါလေရာ ထင်ကျော် တရားစွဲပြီ
တာဝန်ကျယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦးအား ပါးရိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ပြည်သူလူ ထုလုံခြုံရေးကို ရှေးရှုကာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်းတစ်ဦး၏ မြေးဖြစ်သူကို ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအဖွဲ့မှကိုထင်ကျော်က ဧပြီလ ၁၀ ရက်၊ ကမာရွတ်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 06:20:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လာမည့်(5.5.2013)ရက်နေ့ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၌..၅..နှစ်တကြိမ်ကျင်းပသော
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်၊လက်ရှိအနိုင်ရပါတီနှင့် အတိုက်အခံပါတီ
တို့ အားပြိုင်ကြမည့် ပွဲဖြစ်ပါသည်၊ယ္ခင် ကြုံဖူးခဲ့ သောရွေး ကောက်ပွဲများနှင့် မတူ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 06:08:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၅-အိမ်ဖော်အား ငှက်ပျောသီး ၊ ပုလင်းများဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခဲ့သည့် ညီအမ ထောင်ဒဏ်ထပ်တိုး(မလေးရှားသတင်း)
လွန်ခဲ့သော 2003 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လမှ 2014 စက်တင်ဘာလအထိ တစ်နှစ်တိတိအတွင်း Wong Choy Ling နှင့် Wong Choy Kin ညီအမ ၂ ဦးတို့သည် မိမိ အိမ်တွင် ခိုင်းစေရန် ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်ဖော် အင် ဒို နီး ရှားသူ Hanif Muawanah Muhyi အား ငှက်ပျောသီး ၊ ပုလင်း စသည်တို့ဖြင့် အနိုင်ကျင့် နှိပ် စက်ကြောင်း ကို Hanif မှ တိုင်ကြားခဲ့သည်အတွက် Petaling Jaya တရားရုံးတွင် တရားဆွဲ ခံခဲ့ကြရပါ တယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 05:40:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၄-ရုပ်ချောလို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒူဘိုင်းမြို့သား
ဆော်ဒီအာရေဗျ အစိုးရဟာယူအေအီးက ဒူဘိုင်းမြို့သား ဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့ ကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ Omar Borkan Al Gala ကို အရမ်းကိုချောမောလွန်းနေတဲ့အတွက် သူတို့နိုင်ငံကနေနှင် ထုတ်လိုက်တယ် လို့သိရပါတယ် ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆော်ဒီ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အဆိုပါအမျိုးသားကို တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်ပြီး သူတို့တိုင်းပြည်ကချမှတ်ထားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 05:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဖုန်းကနေ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ရုံပါပဲ။ ၁ – setting ကိုဝင်
၂ – Wireless & Networks ထဲကိုဝင် ၃ – Mobile Network ထဲကိုဝင် ၄ – Data Enable ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ Notification Bar ( အပေါ်ဘက် လိုင်းအားပြသောနေရာ နံဘေး) တွင် အပေါ်တက်အောက်ဆင်း မြှားလေးတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ် အင်တာနက်စသုံးလို့ရပါပြီ။ From.. SKY Net - dth/mps
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 05:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၂-ပြည်ပရံပုံငွေကိုလက်ခံပြီး ပြည်တွင်းမှာပါတီထောင်နိုင်ငံရေးလုပ်မည်ဆိုပါကပါတီဖျက်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများနဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ များ ရံပုံငွေရယူသည့်ကဏ္ဍ ဆွေးနွေးကြရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်သားစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 04:53:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၁-သံလျင်တံတားပေါ် ရှေ့ကားကိုဝင်တိုက်တဲ့ ရဲဆိုင်ကယ်
ဒီမနက် ၁၁ နာရီကျော်ကျော်လောက်က သန်လျင် - ရန်ကုန် တံတားကြီးပေါ် သန်လျင်ကနေ ရန်ကုန် ဘက် သွားတဲ့ အခြမ်းမှာ ရဲဝန်ထမ်း ၂ ဦးရဲ့ ဆိုင်ကယ်က ခရီးသည်တင် ဟိုင်းလပ်စ်ကား တစီးကို နောက်ကနေ ဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 04:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄၀-ယူအန်၏ အကြီးမားဆုံးသော ဒုက္ခသည် ပြောင်းရွှေ့မူကြီး
တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော နီပေါနိုင်ငံတွင် ခိုလုံနေခဲ့သော ဘူတန် ဒုက္ခသည် ၇၈၀၀၀ သည် အမေရိကန်နှင့် အနောက် နိုင်ငံများတွင် အခြေချ နေထိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်ဟု ယူအန်က သောကြာနေ့က ကျေညာသည်။
အဆိုပါ ဘူတန် ဒုက္ခသည်များသည် နီပေါနိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုခန့်ကြာ ခိုလုံနေပြီးနောက် ထိုသို့ အခြေချ နေထိုင်ခွင့် ရရှိသွားခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့ရေး အတွက် ဘူတန် အစိုးရနှင့် စေ့စပ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/27/2013 04:03:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၉-“ပိုမိုကြီးမားသည့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတည်ဆောက်ရန် တရုတ် ဆန္ဒရှိ”
တရုတ်နိုင်ငံသည် လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ထက် ပိုမိုကြီးမားသော လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီး တစ်စင်းကို တည်ဆောက်ရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှထိပ်တန်း အရာရှိတစ်ဦးကရေတပ်သည် နောက် ထပ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတစ်စင်းကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/26/2013 12:30:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၈-မြန်မာ့အသံမှရေဒီယိုအဆိုတော်လည်းဖြစ်သူ-ပညာရေးကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့ ယခုသာသနာ ပရဟိတလူမှု့ ဝန်ထမ်းနေသော-ဒေါ်မေကျော့် ရှင်းအကြောင်းလေး
ဒီစာလေးရေးရခြင်းဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာဝေးကွာခဲ့ ပြီး မမျော်လင့် ဘဲအွန်လိုင်းမှာ ပြန်ဆုံခဲ့ ရတဲ့ 
ဆရာမကြီးဒေါ်မေကျော့် ရှင်းပါ ..
ကျွန်တော်ယခုအလင်းရောင်ကြယ်ဘလောက်ဂါရေးတဲ့ လူ နှင့် အတူ တစ်ချိန်က သူ့ ထံမှာများစွာသော
ကျောင်းသားများ-ဆရာဝန်- စစ်ဗိုလ် - အင်္ဂျင်နီယာများ ဖြစ်မြောက်အောင် သင်ကြားမွေးထုတ်ခဲ့ တဲ့ လူတွေ
မနည်းလှပါဘူး ယခုစာဖတ်သူတို့ အထဲမှလည်း ပါကောင်းပါဘူးမှာပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/26/2013 11:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၇-တပ်မတော်သား(၃) ဦး လုပ်ဆောင်သည်ဟု သံသယရှိသည့် ပြည်မြို့ လူသတ်မှုမှ ပေးသော သင်ခန်းစာ
ပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတား အနီးတွင် တပ်မတော်သား(၃) ဦးမှ လူသတ်မှုကျူးလွန် ဆိုသည့် သတင်းကို The Voice တွင် ဖတ်လိုက်ရသည်။ သတင်းဖြစ်စဉ်မှာ သမီးရည်းစား နှစ်ဦး န၀ဒေး တံတားအနီး သဲသောင်ပြင် တွင် ချိန်းတွေ့နေစဉ် လူ(၃) ဦးမှ ရောက်လာပြီး မီးခြစ်ရှိလား မေးကာ နောက်မှ သိုင်းဖက်ပြီး ထိုးကြိတ်ကာ လု ယက် ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လုယက်မှုတွင် စုံတွဲမှ အမျိုးသား သေဆုံးပြီး အမျိုးသမီးမှာ ဆေးရုံ တက်ေ ရာက် နေရ ကြောင်း ကျန်ရစ်သူ စုံတွဲမှ အမျိုးသမီး အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် မအိဇင်မိုးကိုမှ ပြောပြ ခဲ့ သည်။ လုယက်သူတွေ ကို ဖမ်းမိပုံမှာ သေချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး အကူအညီ တောင်း မှုကြောင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 12:44:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၆-*ဒေါ်စုကိုဘာဖြစ်လို့များလူတွေက သည်လောက်တောင်သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေကြရသလဲ။ ကဲကိုကဲလွန်းတယ်တဲ့လား*
ခင် ခင် မျိုး ဖေ့စ်ဘုတ်မှကူးယူတင်ပြပါသည်
ဒေါ် စု ကို ဘာ ဖြစ် လို့ များ လူ တွေ က
သည်လော က် တောင် သဲ သဲ လှုပ် ဖြစ် နေ ကြ ရ သ လဲ။
နယူးယောက်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်ရင်လတ် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတော့ တနာရီမပြည့်ခင်အချိန်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာ အလုံး ၄၀ မှားလို့ဆိုပြီး FB မှာဝေဖန်ပြီး ပြောကြဆိုကြ ဒေါ်စုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဗျ။ တချို့ကလည်း ဒေါ်စုကို ချီးကျူးပါ.. သူများကိုတော့ မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့ စသဖြင့် ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒေါ်စုကို မနှစ်သက်တဲ့သူ ဘက်က စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ ဘာဖြစ်လို့များ ဒေါ်စုကို လူတွေက
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 11:06:00 am2comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၅-ယောက်ျားဖြစ်သူ၏ အင်္ဂါဇာတ်ကို ဓားဖြင့်ဖြတ်သည့် အမျိုးသမီး
ယောကျာ်း ဖြစ်သူ၏ အင်္ဂါဇာတ်ကို ဓားဖြင့်ဖြတ် သည့် အမျိုးသမီးအား ဗြိတိန် တရားရုံးမှ ကြားနာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိ ကက်သ ရင်းကီအူသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ တွင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 10:52:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၄- ကွမ်းရွက်၏ ကျန်းမာရေးကောင်း/ဆိုး အကျိုးကျေးဇူးများ
ကွမ်းရွက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ကယ်လ်စီယမ်၊ ကာရိုတင်း၊ ရိုင်ဘိုဖလေဗင်၊ နိုင်ယာစင်၊ သိုင်ယာမင်းနဲ့ ဗီတာမင်စီတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လတ်တလော လေ့လာမှုတွေအရ ကွမ်းရွက်မှာ တန်နင်၊ သကြား၊ မရှိမဖြစ်ဆီ စတာတွေ ပါဝင်နေကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ကွမ်းရွက်မှာပါတဲ့ ချာဗီကောဆိုတဲ့ ဖီနောဓာတ်ဟာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 09:10:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၃၃-ဖောက်ပြန်ရာသီဥတု နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုပြဿနာက တစ်နှစ်ထက်တစ် နှစ် တိုး၍တိုး၍ ဆိုးဝါးလာသည်။ လူသား တစ်ရပ်လုံးသာမက တိရစ္ဆာန်များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ သစ်ပင်ပန်းမာန်များ အတွက်ပါ ဘေးဒုက္ခဆိုးအဖြစ် စိန်ခေါ် မှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ရှေးယခင်က အပူပိုင်းဒေသတွင်းသာဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိ သော နွေအခါ သောက်သုံးရေ ရှားပါး မှုသည် ယခုအခါ နိုင်ငံအ၀ှမ်း ကြုံတွေ့ နေရပြီးဖြစ်သည်။
မိုးတွင်းကာလ မိုးရွာသွန်းမှုကို အခြေခံသည့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 05:07:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော်အစိုးရ၏ ဒို့အရေးသုံးပါး ပြည်ထောင် စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ် မှုမပြိုကွဲရေး အချုပ်အခြာအာဏာတည် တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုသည့်အရေးသုံးပါး၌ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲ ရေးသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မရှိမဖြစ်လိုကို လိုအပ်ရမည့်အရေးသုံးပါးအနက်အဓိက ခက်မတစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ အခုတလော ခေတ်စားနေသည့်စကားလုံးမှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 05:05:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Isabella Barrett လို့အမည်ရတဲ့ ၆ နှစ်အရွယ်ကလေးမငယ်လေးဟာ အမေရိကန်မှာ သန်းကြွယ်ချမ်းသာတဲ့မော်ဒယ်မလေး ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ချမ်းသာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့  ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူး ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖန်တီးတဲ့ လက်ကောက်နဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ များရှိပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 04:19:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့ ပလာဇာ ပြိုကျရာမှာ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာနေရာမှာ ဒီနေ့ ညနေ ၄ နာရီ အချိန်မှာတော့ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာ ၂၀၀ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာက စာရင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၂၀၀ ထဲက ၁၄၈ ဦးကိုတော့ မိသားစုတွေကို သဂြိုလ်ရန် လွှဲပေးလိုက်ပြီး ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ညဉ့်လုံး အပြိုအပျက်တွေကြားထဲမှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 03:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ် တွင် ၉၆၉အမှတ် တံဆိပ်ပါစတစ်ကာကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မုန်းမြို့ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ ဦးအာမင် (ခ) စိုးလွင် ကို တရားရုံးက ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးမြင့်ကျော် က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 03:13:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၈-အရက်သောက်၊ လူစိတ်ပျောက်ပြီး ခွေးစိတ်ပေါက်တဲ့ ပုသိမ်၊ ချောင်းသာမြို့နယ်ထဲက ဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် ကိုယ့်နှမကို ကိုယ်အဓမ္မပြုကျင့်သတဲ့
ဒီသတင်းကလေးကတော့ ကြာပါပြီ အရက်သေစာ မှုးယစ်ဆေးသုံးစွဲရေး ပပျောက်စေရန် အတွက်ထပ်မံရှာဖွေတင်ပြလိုက်ထာပါ..
ဘိန်း၊ ကင်း၊ ကစော်၊ လှော်စာ၊ အရက်ဆိုတဲ့ မူးယစ်ထုံထိုင်းစေတဲ့ အရာတွေ ကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှီဝဲတတ်သူဟာ လူစိတ်ပျောက်ပြီး ခွေးစိတ်ရောက်ရှိ တတ်ကြောင်းကို ပုသိမ်၊ ချောင်းသာမြို့နယ်၊......ရပ်ကွက်ဖြစ်ရပ်က သတိပြုဆင်ခြင် သင်ခန်းစာထုတ် ယူစရာကောင်း တဲ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုလို့ ဆိုပါရစေ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 02:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၆-မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းတွင်အပူချိန် မြင့်လာနေ၍ ကျန်းမာရေး သတိထားရန် လို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပူချိန်မြင့်နေပြီး အမြင့်ဆုံး ပြည်နယ်၊ မြို့များတွင် အပူချိန်သည် ၄၂ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် အထိ ဖြစ်နေပြီး ဒုတိယ အပူချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် ချင်း၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးများတွင်မူ ၃၈ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ဖြစ်နေသောကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပါ အန္တရာယ်ရှိသည့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/25/2013 02:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၅-အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော် ဗုံးကွဲ ဒဏ်ရာရ ဆိုသည့် ကောလဟာလ များကို AP သတင်းမှ လိုက်ရှင်းရ
အိမ်ဖြူတော်တွင် ဧပြီ ၂၃ ရက်က ပေါက်ကွဲမှု နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟူသော သတင်း ထုတ်ပြန် ချက် သည် မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်းနှင့် ယင်း သတင်းကြောင့် စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/24/2013 10:13:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူနေတဲ့သူတို့နဲ့ အမှတ်တရဓါတ်ပုံလေးပါ
ရဲဘော်ရဲ့ခါးမှာချိတ်ထားတဲ့ရေဘူးလေးဟာ သံဗူးလေးမဟုတ်ပဲ ရေသန့်ဘူးခွံလေးကိုအသုံးပြုထားတာလေးတွေ့တော့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/24/2013 07:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၃-မြန်မာ့စစ်တပ် အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - (၂)
၁၉၆၇ မှာကျတော့ အင်ဒိုနီးရှားတပ်က သမ္မတဆူကာနို လွတ်လပ်ရေးလုပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပေါ့၊ သူ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အင်အားစုတစ်ခု ရှိသေးတယ်ဆိုတာကို ဒီဆန့်ကျင်ဘက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုက သိထားတယ်။ အဲလို ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဆူကာနို မပြုတ်ခင်ကတည်းက
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/24/2013 06:11:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၂-မြန်မာ့စစ်တပ် အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - (၁)
စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဟာ တပ်မတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်စပ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် သတင်းများအား တင်ပြပေးနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ မရောက်ခင် စစ်အာဏာရှင်များ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ခေတ်ကာလကတည်းက တပ်မတော်အား ပြည်သူ့ဘက် ရပ်တည်လာသည့် ပြည်သူ့တပ်မတော် ဖြစ်လာစေရေး ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးထိပ်ထားပြီး Professional Army ဖြစ်လာစေရေးကို နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက်အထိ ထားရှိကာ တိုက်တွန်း စည်းရုံးနေတဲ့ မီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တပ်မတော်သားများရဲ့ ခံစားချက်၊ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုသည့် ဆန္ဒများကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 4/24/2013 06:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ